Doorashada madaxweyne ee Mauritania: Ould Boubacar ayaa ku martiqaaday tartanka si uu u guuleysto Aziz - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Doorashada madaxweyne Mauritania: Ould Boubacar ayaa ku martiqaaday tartanka si uu u guuleysto Aziz - JeuneAfrique.com
Doorashada madaxweyne Mauritania: Ould Boubacar ayaa ku martiqaaday tartanka si uu u guuleysto Aziz - JeuneAfrique.com
Maxamed Ould Boubacar, marinka 30, ee Nouakchott. © Carmen Abd Ali / AFP
Ra'iisul-wasaarihii hore ee Mauritania ayaa ku dhawaaqay musharaxa doorashada madaxweynenimada June. Maxamed Ould Ghazouani, oo ah madaxweynaha xilka madaxweynenimada, wuxuu aaminsan yahay inuu heysto saxda saxda ah in uu u muuqdo isbedelka.
Mauritania waxay ka luntey wax yar. Isagoo ka soo baxaya xasilloonidiisa si uu ugu dhawaaqo, 30 Maarso, wuxuu u sharraxan yahay doorashada madaxweynenimada June, Sidi Maxamed Ould Boubacar ayaa go'aansaday inuu ciyaaro martida la yaabka leh. Waayo, muwaadiniin badan oo reer Jamhuuriyadda Islaamiga ah, Ra'iisul Wasaarihii hore iyo Ambassador hore waa addoonkii xasilloon, anshax, mar walba si degdeg ah u taqalustay hoos madaxweyne oo isku xigta, laakiinse iyagu ma ay wax badan oo ku saabsan ninkan 62 sano og.
Shirka Qaranka ee Liibiya oo ay soo abaabushay Qaramada Midoobay dib loo dhigay
Maurice Kamto waxay u keentaa gabbad si garsoorayaasha ah